फेसबूकमा चन्दा, कमाउने धन्दा – Hamrosandesh.com
दिलनिशानी मगर ।
कम्प आएको बेलामा एक फेसबूके अभियान्ताले गहभरि आँसु निकालेर युरोपमा सहयोग अभियान चलाएछन् । बारीको पाटामा डा. रामशरण महतले दिएको टिनको पातालाई कहालीलाग्दो गरेर पीडितहरूले टाँगेका थिए । डा. बाबुराम भट्टराईको आर्किटेक्टले त्यो टिनको पाता घोप्टो पारिदियो । त्यही टिनको पाताको फोटो सामाजिक सञ्जालमा देखाएर ती सामाजिक अभियान्ताले हृदयविदारक क्याप्सन लेखेछन्– जो थियो सबै सकियो, मिनेटभरिमा जीवन तहसनहस भयो ।